ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ နန်းဆန်စွာလှပနေသူလေး ယဉ်လတ် - Cele Platform
ပြည့်ဖောင်းတဲ့ပါးလေးထက်မှာ မွေးရာပါ လှပလွန်းတဲ့ ပါးချိုင့်လေးရဲ့ ပိုင်ရှင် မင်းသမီးချောလေး ယဉ်လတ်ကို ပရိတ်သတ်တွေသိကြမှာပါနော်။ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးတွေကို နုနယ်တဲ့ မိန်းမသားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် အနုပညာကိုချစ်တဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ထားလေးကလည်း လေးစားစရာပါပဲနော်။
အားကစားကိုလိုက်စားသူလေးဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျစ်လျစ်ပြီးတော့ ဆွဲဆောင်မှုတွေပို နေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ လတ်တလောမှာဆိုရင်လည်း လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ သူမရဲ့ Bottle Cap Challenge ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာ အရမ်းကိုလူကြိုက်များ လူကြည့်များတဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လို့နေခဲ့ပါသေးတယ်နော်။
မိန်းကလေးဆန်ဆန်လေးတွေ ဝတ်တဲ့အခါတိုင်း ပုရိသတွေရင်ခုန်သံတွေကို ဆူညံသွားစေတဲ့ ယဉ်လတ်လေးဟာ အခုတစ်ခါမှာလည်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှတရားနဲ့ နုနယ်တဲ့မိန်းမသားလေးအဖြစ် ပုရိသတွေကို ရူးခါသွားစေခဲ့ပြန်ပါပြီနော်။ ပန်းနုရောင်လေးသန်းနေတဲ့ ပါးမို့မို့လေးထက်က ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတေရှိတဲ့အပြုံးလေးကြောင့် ပုရိသတွေတင်သာမကပဲ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေကပါ အချစ်တွေပိုနေခဲ့ရပါတယ်နော်။
ကဲ…. ကြွေပြီးရင်းကြွေသွားရလောက်အောင် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ကျက်သရေရှိရှိလှပနေတဲ့ ယဉ်လတ်ရဲ့ ရင်ခုန်ချင်စရာပုံရိပ်လှလှလေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Myanmarload
ပွညျ့ဖောငျးတဲ့ပါးလေးထကျမှာ မှေးရာပါ လှပလှနျးတဲ့ ပါးခြိုငျ့လေးရဲ့ ပိုငျရှငျ မငျးသမီးခြောလေး ယဉျလတျကို ပရိတျသတျတှသေိကွမှာပါနျော။ ကွမျးကွမျးရမျးရမျးနဲ့ ဇာတျဝငျခနျးလေးတှကေို နုနယျတဲ့ မိနျးမသားလေးတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ ပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ အနုပညာကိုခဈြတဲ့ သူမရဲ့ စိတျထားလေးကလညျး လေးစားစရာပါပဲနျော။
အားကစားကိုလိုကျစားသူလေးဖွဈတဲ့ အတှကျ ကဈြလဈြပွီးတော့ ဆှဲဆောငျမှုတှပေို နတေဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးလညျးဖွဈပါတယျနျော။ လတျတလောမှာဆိုရငျလညျး လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ သူမရဲ့ Bottle Cap Challenge ဗီဒီယိုဖိုငျလေးဟာ အရမျးကိုလူကွိုကျမြား လူကွညျ့မြားတဲ့စာရငျးထဲမှာ ပါဝငျလို့နခေဲ့ပါသေးတယျနျော။
မိနျးကလေးဆနျဆနျလေးတှေ ဝတျတဲ့အခါတိုငျး ပုရိသတှရေငျခုနျသံတှကေို ဆူညံသှားစတေဲ့ ယဉျလတျလေးဟာ အခုတဈခါမှာလညျး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့အလှတရားနဲ့ နုနယျတဲ့မိနျးမသားလေးအဖွဈ ပုရိသတှကေို ရူးခါသှားစခေဲ့ပွနျပါပွီနျော။ ပနျးနုရောငျလေးသနျးနတေဲ့ ပါးမို့မို့လေးထကျက ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုတရှေိတဲ့အပွုံးလေးကွောငျ့ ပုရိသတှတေငျသာမကပဲ မိနျးကလေးပရိတျသတျတှကေပါ အခဈြတှပေိုနခေဲ့ရပါတယျနျော။ကဲ…. ကွှပွေီးရငျးကွှသှေားရလောကျအောငျ ရိုးရိုးယဉျယဉျလေးနဲ့ ကကျြသရရှေိရှိလှပနတေဲ့ ယဉျလတျရဲ့ ရငျခုနျခငျြစရာပုံရိပျလှလှလေးတှကေို ခဈြပရိတျသတျတှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။Myanmarload